Di Matteo oo sheegay in mustaqbalka Lampard uu weli yaalo Chelsea. - Caasimada Online
Home Warar Di Matteo oo sheegay in mustaqbalka Lampard uu weli yaalo Chelsea.
Di Matteo oo sheegay in mustaqbalka Lampard uu weli yaalo Chelsea.
Roberto Di Matteo ayaa qiray in Lamprad uu weli mustaqbal ku leeyahay kooxda Chelsea, inkastoo loo tix gelinaayo in ciyaaryahanka qadka dhexe uu ka tago Stamford Bridge.
Kulankii sabtii lasoo dhaafay ay Chelsea 2-1 uga badisay Arsenal ciyaar ka tirsaneyd Barclays Premier League ayaa ahaa guushii sedaxaad ee uu Lampard ka maqan yahay Line-up ka kooxda heysata Champions League, iyadoo Ramires iyo John Obi Mikel loo doortay inay buuxiyaan booska qadka dhexe.
Lamprad ayaa loo qiray inuu dhaawac ahaa kulankii Talaadadii hore ee Carling Cup-ka ay ku garaaceen Wolves, laakiin waxaa 34 jirkaan laga waayey kooxdii booqatay Emirates Stadium kaasoo ku jira sanadii ugu dambeysay ee qandaraaskiisa.
Frank ayaa looga gacan haatinayaa Los Angeles Galaxy, iyadoo loot ix gelinaayo saxiix weyn oo Major League Soccer ah.
Waxaa la filayaa inuu kusoo laabto kulanka caawa ee Champions League ay Blues la ciyaareyso FC Nordsjaelland wuxuuna sheegay Di Matteo habeenkii Isniinta: “Mustaqbalkiisu waa mid ku awood badan kooxda. Waana ciyaaryahan muhim inoo ah.
“Waa la sheekeystaa, haa, wuxuuna ka mid yahay ciyaarayahada baasaska xoogan ee kooxda. Waxaan jeclahay SYSTEM-ka isbedelka. Waxay kooxdu lumineysaa taageerayaal badan hadii uusan ka mid aheyn, markii uu kooxda ka mid yahay wuxuu noo saacidaa si wanaagsan.”